Shariif oo u ololeynaya in la fasaxo kuraasta xayiran | KEYDMEDIA ENGLISH
Shariif oo u ololeynaya in la fasaxo kuraasta xayiran
Shariif, wuxuu si aan gambad lahayn u doonayaa in la fasaxo kursiga HOP086, oo Fahad Yaasiin ka soo boobay Baladweyne, kaas oo odayaal dhaqameedka beesha leh kursiga iyo musharixiintii u tartamayayba ka soo gudbiyeen cabasho bishii 2-aad.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka mid noqday, siyaasiyiinta u ololeynaya in la fasaxo kuraasta uu Guddiga FEIT diiday in la asnixiyo natiijada doorashadooda, ee kala ah; HOP154, HOP103, HOP204 iyo HOP086.
Guddoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran, wuxuu carabaabay in sababta Guddiga Doorashadu u hor istaageen Afarta kursi ay tahay khilaaf uu sheegay inuu ka dhaxeeyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Xasan Laftagareen.
Sheekh Shariif, wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay khalkhalka uu doorashada galiyay khilaafka uu xusay, isagoo iska indho tiray in labo ka mid ah kuraasta KG laga hakiyay ay hor istaageen hoggaankii FEIT, ee Farmaajo ku daabnaa ee Cirro hor kacayay.
“Waxaan aad uga walaacsanahay kala ra’yi duwanaanshaha soo kala dhex gashay RW Rooble iyo Madaxweynaha KG Cabdicasiis Lafta Gareen taas oo khalkhal gelisey habsami u socodka doorashadii waqtiga dheer la sugayay soo gebagebeynteeda”. Ayuu yiri Shariif.
Shariif, isagoo meesha ka saaraya Guddiga Doorashooyinka oo msuul ka ah hirgalinta hannaanka dadban ee lagu heshiisay, wuxuu soo jeediyay in Rooble iyo Laftagareen, wada-xaajood ku dhameeyaan muranka ka dhashay kuraasta, taasoo u muuqata marin habaabin.
Madaxweynihii hore, Shariif, ayaa u muuqda inuu ololihiisa doorashada ka dhiganayo inuu garab taagan yahay maamulka Koofur galbeed, isagoo Laftagareen ku ayidsan warkii uu shalay sheegay ee ahaa in si gaar ah oo takoor ku jiro loo beegsano dowlad gobolleedkaas.
Sidoo kale, Shariif, wuxuu si aan gambad lahayn u doonayaa in la fasaxo kursiga HOP086, oo Fahad Yaasiin ka soo boobay Baladweyne, kaas oo odayaal dhaqameedka beesha leh kursiga iyo musharixiintii u tartamayayba ka soo gudbiyeen cabasho bishii 2-aad.
Shariif, ayaa dhowr jeer lagu dhaleeceeyay tallaabooyin aan waaqiga ka turjumeen oo uu qaday, waxaana ugu danbeysay, markii uu dhawaan sheegay in qaraxyadii Baladweyne soo maleegeen Al-Shabaab, isagoo meesha ka saaraya in Villa Soomaaliya wax ka ogayd.
Sida ay dhigayaan heshiiyada iyo habraacyada kala danbeeyay ee doorashada, ma jiro, qodob Rooble iyo Laftagareen u ogolaanaya in ay wada-xaadood ku dhameeyaan, go’aan hakin natiijo kuraas ah oo ka soo baxay Guddiga FEIT oo doorashada masuul ka ah.